Karoona Fayras: Khatar Intee La’eg Ayuu ii Geysan Karaa Haddii aan uur Leeyahay? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
BBC Somali — May 8, 2020
Taxaddar ahaan haweenka uurka leh waxaa loo sheegayaa in ay feejignaadaan isla markaana ay si gaar ah u raacaan tallaabooyinka looga hortagayo coronavirus, sid kala fogaanshaha taas oo hoos u dhigi karta khatarta kaga imaan karta cudurka. Blase maxeynu kala soconaa saameynta uu cudurkan ku yeelanayo haweenka uurka leh?
Coronavirus dhibaato intee la eg ayuu ii geysan karaa haddii aan uur leeyahay?
Inkastoo wali wax badan oo ku saabsan sida uu haweenka uurka leh u samaeyn karo xanuunkaan aysan dhaqaatiirtu ogeyn, haddana waxaa la ogyahay in haweenka uurka leh aanay wax badan ka duwnayn dad kale ee qaangaarka ah
“Haddii ay jirto halis waynu arki doonaa hadda,” ayay tiri Christoph Lees,oo ku takhasustay ariimaha hooyada iyo dhallaanka isla markaana wax ka dhigta machad ku yaalla London.
Sida guud ahaan bulshada kale, haddii uu cudurku ku dhaco haweenku uurka leh waxey leeyihiin astaamo khafiif ah ama dhex dhexaad ah wayna ka soo kabsadaan. Calaamadaha waxaa ka mid ah Qandho,neefqabasho iyo madax xanuun. Coronavirus waxaa uu yeelan karaa dhibaato badan haddii ay si daran ugu bukoodaan haweenka uurka leh ,balse taasi waa wax aad u yar oo dhif ah .
Waxaase lagula talinayaa haweenka uureyda ah in badanaa ay joogaan guriga isla markaana aysan si ka fool ka fool ah dad ula kulmin marwalbana ay la xiriiraan dhaqaatiirta. Fayrisyada qaar ayaa aad ugu daran haweenka uurka leh balse ma jirto wax caddeyn ah oo la xiriirta fayraskan Korona oo muujinaya inuu u daranyahay haweenka uurka leh.
Ilmaheygu khatar miyuu ugu jiraa in wakhtigiisa dhalmada ka soo horumaro?
Wararka qaar ayaa sheegaya in ilmuhu ay ka soo hormari karaan wakhtigii loogu talagalay marka ay haweenka uurka leh aad ugu xanuusadaan fayraska Korona ,balse way adagtahay in la ogaado sababtaas. Sababha loo cuskaday waxaa ka mid ah in shaqaalaha caafimaadka ay arkeen calaamado muujinayo in ilmuhu ay khatar ku jiraan.
Xilliga uurka, cunugguna uu ku dhex korayo caloosha waxaa uu cadaadis xoogan saaraa sambabbada, wadnaha iyo habdhiska wareegga dhiiga hooyada. In hooyadu ay aad ula xanuusato Covid-19-na waxey keeni kartaa xaalad khatar ah oo sababi karta in hooyada ay neeftu ku adkaato.
“Cudurrada degdegga ah ee keena qandhada waxay sababi karaan fool iyo in hooyadu dhiciso,” ayay tiri Prof Marian Knight, oo takhasustay caafimaadka hooyada iyo dhallaanka kana tirsan Jaamacadda Oxford.
Ma u gudbin karaa Fayraska ilmaha uurka ku jira?
Tani waa suurta gal. waxaa jira warar sheegaya in ay jiraan kiisas aan badneyn oo arrintan la xiriirta, balse carruurta waxaa isbitaalka laga soo saaraa iyagoo caafimaad qaba. Daraasad laga soo saaray dalka Shiinaha ayaa lagu ogaaday in 3 ka mid ah 33 ilmaha ay dhaleen hooyayinka qaba Covid-19 laga helay cudurka.
Way adag tahay in la ogaado xilliga uu cudurku ku dhacay dhallaanka, sida xilliga foosha ama wax yar ka dib cunugga dhashadiisa. Balse ma jirto caddeymo muujinaya in fayrasku uu dhibbaato u gaysan karo koritaanka ilmaha sida laga soo xigtay Royal College oo ah Machadka laga barto culuumta hooyada iyo dhallaanka .
Maxey tahay in aan Sameeyo haddii aan uur leeyahay isagana shakiyo Fayrsaka?
Haddii aad isku aragto calaamadaha hargabka ama wax hargab u eg waa in aad guriga joogtaa muddo todobaad ah. Hadii aad balamo la leedahay wakhtigaas umulisadaada ama dhaqtarkaada waa in aad ogeysiisaa sida hadba xaaladaadu tahay. Haweenka intooda badan waxaa ay leeyihiin astaamo fudfudud oo haddana maalmo kadib laga waayi karo qofka.
Ma inaan shaqeeyaa haddii aan uur leeyahay?
Hadii aad ur leedahay guriga ayaad ka shaqeyn kartaa. Haii aad uur leedahay in ka badan 28 todobaad ama ay jiraan xaalado kale oo xannuun ah, waxaa muhiim ah inaad ku dadaasho kala fogaanshaha oo aadan dadka u dhawaan. Haweenka uurkoodu ka yaryahay 28 asbuuc way ka shaqeyn karaan bannaaka guryahay waxaase sidoo kale muhiim ah in aysan dadka kale u dhawaan islamarkaana ay u jirsadaan ugu yaraan labo mitir.
Tags: Karoona Fayras: Khatar Intee La'eg Ayuu ii Geysan Karaa Haddii aan uur Leeyahay?
Next post 8 Gabdhood oo Geesinnimadooda Laga Yaabay Dagaalkii Labaad ee Adduunka?
Previous post Ian Powell: 8 Sano oo uu Darogo Cunaayay Ka Dib Hadda Waa Milyaneer